Thailand PM tarisiro yekukanda kuvhura mikova yenyika mumwedzi mina
musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose » Thailand Kuputsa Nhau » Thailand PM tarisiro yekukanda kuvhura mikova yenyika mumwedzi mina
Kuputsa Nhau Dzenyika Dzepasi Pose • Bhizinesi Kufamba • Hurumende Nhau • Hospitality Industry • Hotera & Resorts • Investments • nhau • Kuvakazve • chengetedzo • Thailand Kuputsa Nhau • ushanyi • Tourism Kutaura • Kufamba Kwamugumo Kwidziridzo • Zvakavanzika Zvokufamba • Akasiyana Nhau
Mukutaura kuchangobva kuitika kurudzi rweThailand nemutungamiriri wehurumende, General Prayut Chan-o-cha paTV pombi, Mutungamiriri akataura kuti hurumende yakatsunga kuvhurazve nyika mumazuva zana nemakumi maviri.
Matunhu makuru evashanyi munyika ari kuvhurwa zvishoma nezvishoma sezvo vakagadzirira.
Prime Minister Prayut vakati Phuket, pamwe nemushandirapamwe wayo wePhuket Sandbox, ichashanda sechirongwa chekuyedza chirongwa chekuvhura nyika.
Mutungamiriri akabvuma njodzi dzakanangana nedanho hombe iri asi akadzokorora kuti hurumende inoisa pekutanga hupenyu hwevanhu uye kuti nyika yakasimba zvakakwana kuti igadzirise njodzi dzakadai.
General Prayut akataura zvakare kuti, kuti ikwanise kuvhura nyika mumazuva zana nemakumi maviri, hurumende ichaita zvese zvinobvira kuona kuti majekiseni aunzwa zvinoenderana nezvakatarisirwa. Sekureva kwaMDC, munguva pfupi yapfuura, danho repamusoro rinotarisirwa nderekuti munhu wese awane, zvirinani, pfuti yavo yekutanga yekudzivirira mushonga nekukurumidza sezvinobvira, nekuti iyo yekutanga pfuti yatowedzera zvakanyanya kugona kwemuviri kubata nehutachiona uye inogona kuponesa hupenyu hwemunhu. Munguva yakareba-nguva, manejimendi anokwanisa kuumbiridza vagari vayo sezvainodiwa, seThailand inokwanisa kugadzira mishonga yekudzivirira mudzimba.
Mumashoko kubva kuPattaya, Meya Sonthaya Kunplome akataura muna Chikumi 16 kuti guta rakabhuka dosi dzeBIBIBP-CorV dzakagadzirwa neChina National Pharmaceutical Group, iyo inowanzozivikanwa seSinopharm. Guta rairaira zviuru zana zvemishonga yekushandisa inoshandisa 100,000 miriyoni bah (US $ 8.8) yaakaisa parutivi ye COVID-19 jabs. Sonthaya haana kuzivisa kuti majekiseni eSinopharm achaunzwa riini asi akati guta richakurumidza kuvhura kunyoreswa kwemitero mafomu epamhepo uye ekunyoresa ayo achagoverwa nevatungamiriri veguta kunharaunda.
Madhiri ari kutengwa pamutengo wekutengesa we888 baht (US $ 28.28) kubva kuChulabhorn Royal Academy, iyo yakatamisa kupinza 1 miriyoni Sinopharm madosi mukati mekushoropodzwa pamusoro pekutadza kwehurumende kusaburitsa majekiseni akakwana. Iyo Chulabhorn Royal Academy yakatengesa mushonga weSinopharm pa888 baht pamushonga uye wairambidza vatengi kupfuudza mutengo kune vanogamuchira vaccine. Mutengo unovhara mutengo wejekiseni, kutakurwa uye inishuwarenzi pamhedzisiro.
Pattaya inoda kubaya 120,000 80,000 vanhu munzvimbo yakakura yePattaya, makumi masere ezviuru vane makore anopfuura gumi nemapfumbamwe, kusanganisira vakuru vemo. Pattaya hurumende nevatungamiriri vemabhizimusi vanga vachida kubaya nhomba 70% yevagari vemo kuitira kuti vavhurezve guta kune vekunze kushanya. Hurumende, zvisinei, yakaisa pamberi peguta reBangkok, ichisiya Chonburi nemitero yakashomeka yemadhosi akaitwa neChina Sinovac Biotech uye AstraZeneca PLC.
Jamaica Tourism inodaidzira mazano kubva kuvatungamiriri venyika ...
Vazhinji vashanyi veHawaii vakabaiwa jekiseni rakanangana neCOBV-19